January 26, 2017 Cali Cabdigiir 0 Comment
Waa Kuma Wasiirka Sodcaalka, Qaxootiga iyo Muwaadinnimada Dalka Kanada?
Canadian Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
Represents the riding of York South — Weston: Metropolitan of Toronto, Province of Ontario.
Born and raised in Somalia, Ahmed immigrated to Canada in 1993 where he settled in Regent Park and quickly gravitated towards public service. In 2002, he co-founded the Regent Park Community Council and could secure a $500 million revitalization project for Regent Park, all while ensuring the interests of the area’s nearly 15,000 residents were protected. Ahmed also served as the National President of the Canadian Somali Congress – a Somali community organization that works with national and regional authorities to advocate on issues of importance to Canadians of Somali heritage and strengthen civic engagement and integration. His results-driven reputation led to an invitation to join the task force for modernizing income security for adults in the Toronto City Summit Alliance.
Axmed Xuseen iskama noqon Wasiirka Qaxootiga, Sodcaalka iyo Muwaaddinnimada ee dalka 2aad ee dhul ahaan koonka ugu weyn, tusaalaha laga qaadan karaase waa maxay xilkasnimada iyo dadaalka wasiirka?
Kanada waxaa doorasho ku haga wasiirka koowaad (Prime minister) oo haddana hoggaamiye u ah xisbiga majaraha haya iyo wakiil u jooga Boqotooyada Ingiriiska (Governor General), oo aan xeer ahaan siyaasadda door weyn ka ciyaari karin.
Kanada waxa ay ka tirsan tahay qaaradda Waqooyi Ameerika oo 23 dal kor u dhaafaya. Waa dal hodan ah, qaxootiga soo dhaweeya kana tirsan dalalka la isku yiraahdo G7 (group 7). In kasta oo 2014 dalka Raashiya oo G8 ku ahaan jirey laga saaray, G7 waxaa loogu baxshay iyaga oo horumar lixaad leh ka gaaray xagga farsamada, aqoonta iyo dhaqaalaha.Dalalka G7 loo yaqaan waa: Kanada, Boqortooyada Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Germany, Jabbaan iyo Ameerika (USA).
Dalka Kanada waxa uu ka kooban tahay 10 gobol (province) iyo 3 deegaan (Territory). Gobolladu waxa ay kala yihiin Ontario, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Newfoundlandiyo Labrador, Nova scotia, Prince Edward Island, Quebec, Manitoba iyo New Brunswick iyo saddexda deegaan oo la kala yiraahdo Northwest, Nunavut iyo Yukon.
Hadda, 2017, tirada dadka ku nool Kanada waa 36 malyan oo 7.3 malyan aysan ku dhalan. Haddana 14 malyan oo 36-da ka mid ah waxa ay ku nooshahay gobolka Ontario (Ontario province) -kaas oo isla markaas aan ahayn kan dhul ahaan ugu weyn.
2015, gobolka Ontario xildhibaannada uu Golaha Wakiillada ee qaranka u doortay waxaa ka mid ah wasiirka Sodcaalka, Qaxootiga iyo Muwaaddinnimada, Xeer yahan haddana qareen ah Mudane Axmed Xuseen. Deegaanka uu ka soo galay waxaa kula tartamaysay 4 qof oo kale.
Arrin kale aan idiin sii bidhaansho. Marka la tixraaco Kanada [Statistics Canada, the Government of Canada agency commissioned with producing statistics to help better understand Canada, its population, resources, economy, society, and culture], Waxa ay si sugan u sheegtay 2013 in tirada Soomaalida (Somali-Canadian) tahay 50,000, halka haddana lagu sheego 150,000. Doodda tirada Soomaalida haddiiba aan tan dambe oo sii korortay siina badanaysa u deynno, waxa ay u kala badan yihiin gobollada Ontario, British Columbia, Alberta, iyo Manitoba. Sida dalalka xeerarka iyo dhaqanka qiimeeya, Kanada, aagga aad deggan tahay oo aqoonsiga kuugu qoran baad ka codayn kartaa.
Haddaba, dulucda aantirokoobta iyo deegaannadooda Soomaalida Kanada ka leennahay waa in wasiirka oo helay 20,000 oo cod, oo qofkii ku xigey uu ugu yaraan 4000 oo cod dheeraa, Soomaalida Kanada keli ah ma dooran. Waxa uu sumcad ka samaystay bulshada guud oo cod badan siisay.
Dunida badankeed, Xeer yahannimo kolka aad ku qalinjebiso hore kama noqon kartid qareen ee waxaa la galaa tijaabo ama imtixaan la yiraahdo “Law/Bar Exam” oo aad u adag. Haddii aad ku gudubto waxa aad qaadanaysaa aqoonsiga/shahaadada qareennimada, si aad goleyaasha garsoorka uga dooddo.
Sida aad qaybta Ingiriiska ah ku soo aragtay, Wasiir Xuseen in kasta oo uu 16 jir ahaa kolkii uu Kanada yimid, haddana kuma habsaamin bilicda iyo dhaldhalaalka u muuqda. Waxa uu ku mashquulay wax barasho. Haddana, ku-soo-jeedka akhriska waxa uu ku daray taakulayn bulsho. Waxa uu isaga baxay labo jaamacadood iyo shahaadadii qareennimada.
Soomaalida dalkoodii hore ka carartay dabadeedna tartanka ka sameeyey dalalka hore u maray oo ay magangelyada weyddiisteen ama qaxootinimo ku soo dhaweeyey kuma badna bulshada ay uskun ahaan ka soo jeedaan, waxaase jirta murti tiraahda:Nasiibku waxa uu gacan siiyaa maanka diyaarsan.
Cabdi Warsame waxa uu 2013 doorasho ku galay Golaha Deegaanka ee magaalada Miniyaabolis (city Council, Minneapolis, Minnesota state) ee dalka Maraykanka, halka Ilhaan Cumar ay iyana doorasho ku gashay Golaha Wakiillada Gobolka (State senator)ee isla gobolka Minnesota 2016.
Haddana, Axmed Xuseen, Ilhaan Cumar, Cabdi Warsame iyo kumanyaalka kale oo inta deegaankii ay ku dhasheen kuna barbaareen ka dalaabay meelihii ay xasilloonida ka heleen aqoon, dadaal, dad-la-dhaqan hufan iyo taakulayn ka sameeyey waxa ay higsanayeen laac u muuqday.
Aniga oo soo kufinaya sooyaalka kooban ee aan dusha ka soo marnay ee Xuseen, Cumar iyo Warsame, qof Soomaali ah oo qaxootinimo ku galay dal hore u maray dabadeedna inta aqoon isu yeelay haddana xildhibaan ka noqday waxaa uga horreeyeyAyaan Xirsi Cali. In kasta oo ay hadda ku nooshahay dalka Maraykanka, Ayaan waxa ay Golaha Wakiillada ee dalka Holland (Netherlands) doorasho uga mid noqotay 2003.
Cali Cabdigiir waa qoraa buugaag badan leh sida Sandareerto, Gocosho, Hortii Ma La Iska Baandheeyey, Maanraac, Abaal, Furfur iyo Filanwaa, Quursiga iyo Addoonsiga Soomaalida, Ciirsila, kuwo kale iyo qoraallo kale oo badan. Waxa uu ku nool yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada (Canada). Caliganay54@hotmail.com/abdigir54@gmail.com
www.amazon.com, www.amazon.co.uk, ama www.amazon.camidkoodhaddii aad gasho kuna qorto Cali Cabdigiir waxa aad arki doontaa buugta hoos ku qoran.
Furfur iyo Filanwaa: Dagaalka sokeeye ee Soomaaliya wax qumman lagama qorin. Aamina oo Xamar ku dhalatay kuna kortay waxay dagaalka sokeeye ku weyday reerkoodii oo dhan iyo barbaar ay Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliya ka wada baxeen aadna isu jeclaayeen. Aamina, dhibtaas magaalada Xamar ku qabsatay kuma halmaamin dalkeeda oo ay aad u jeceshahay iyo Soomaalinimada oo aad ugu fog. Haddana, mar kale bay nin isjeclaadeen mucjisada DNA ama hiddesidaha baana walaalkeed ka dhigtay. Sida DNA ama hiddesiduhu u caddayn doono walaaltinimada iyana waa arrin amakaag ah oo dhab noqotay, iyada oo ninku London ee boqortooyada Ingiriiska ku dhashay.
← Illowsho Dhawaa Ma Ummul Baa?
Su’aashii iyo safarkii nafsadda! →
June 17, 2016 Bogga Maandoon 41
Haweenka iyo Hoggaanka (Qaybtii 2-aad)
May 4, 2016 Maxamed Cabdilaahi 0
Abdiqani Ahmed (1)
Cabdi Ismaaciil (27)
Cali Cabdigiir (3)
Dooddii labada qoraa